Challenge The Good News Paper - Zvokwadi muzvitendero zvinopikisana (Shona)
Zvokwadi muzvitendero zvinopikisana (Shona)
Nomsa Sibanda ainzwa aripakati pokukakatirana kwezvitenderano zvevabereki vake, asi matambudziko eupenyu ndiwo akamuratidza zvokwadi chaiyo. Nomsa anoti "Baba vaiita zvo un'anga zvokuti vaitokwikwidzana nedzimwe n'anga." Nyangwe zvazvo baba vake vaiita mutambo youn'nga pamusha pavo, Mai vaNomsa havana kuneta murutendo rwavo rwechuKristu.
Nomsa anoti "Ndaifunga nezvaMwari nokuti Mai vedu vaiimba nekunamata nesu kana Baba vasipo, vainamatira kuti tive noupenyu hwakanaka uye kuti tiwanikwe nevarume vanotya Mwari." Nokufamba kwenguva vabereki vake vakaparadzana, Baba vake vakawana mumwe mudzimai. Nomsa anorangarira kuti "Ndiri mugwero rechitatu ndakatanga kugara naBaba neMudzimai wavo wechipiri, hupenyu wakabva hwaoma zvokuti ndakatanga kurarama nokuba pamwe nokunyeba, ndainyanya kuba zvokudya nokuda kwokuti mainini ava vaitipa kudya kunenge kwashata nembatya dzinenge dzarambwawo nevana vavo."
Chero nanhasi uno Nomsa anoti "Ndinombonzwa ndichida kunyepa pamwe nokuvenga Mainini vangu." Ava kuchikoro chevakuru Nomsa akanzwa kuti aifanirwa kuziva Mwari sezvaiita Mai vake. Nomsa anoti "Kurudziro nemunamato yaMai vangu yakaita kuti nditswage Mwari." Nomsa akava nhengo yeboka revaiverenga magwaro ebhaibheri, iro raanoti "Rakandipa simbiso munguva yekuomerwa noupenyu, kuburikidza neminamato yataiita mumapoka aya ndakanzwawo nezva Jesu anova mudzikinuri wevanhu, uyewo nokuti akafira isu pamuchinjikwa ndakanzwa ndichivimba naJesu maringe neshoko riri pana Mapisarema 23 iro raigarotaurwa naMai vangu."
Panguva yePasika anorangarira achiona bhaisikopo rokufa nokumuka kwaJesu. "Pandakaona bhaisikopo rokufa kwaJesu, ndakanzwisisa kuzvipira kwake kuupenyu hwangu, chero ndirimutadzi." Nomsa anoti akanzwa achida kuva naJesu. "Ndakagamuchira Jesu somuponesi wangu. Ndinonzwa kuti ndiri muKristu nokuti ndinotenda mungwara raJesu uye ndinorarama maringe nokuda kwake."
Mwari vakaita minana muupenyu hwangu. Vakanotipa murume akanaka nevanasikana vatatu. Mwari vakandipa simba pamusoro pemweya yerima yenyika ino."
"Nekuteura nguva dzose ndinokwanisa kukunda zvivi zvangu. Kana oda utiziro nokudzivirirwa, Nomsa anoti anotarira kunaJesu. "Jesu ndiye Ibwe redu," anodaro Nomsa. "Ndiye bako rokuhwanda munguva dzokutambura. Anoita zvose nechinangwa muupenyu hwako." Nomsa anoti "Kuna avo vasingazive Jesu, musarasa tariro nokuti chii chingaitika muupenyu. Jesu anoda kukuzarurira musiwo, ndiye nzira, zvokwadi noupenyu. Mwari havakurasi, asi munhu anokurasa." Jesu anoti "Huyai kwandiri mose makaremerwa ndikuzorodzei, akafira zvivi zvedu uye akatambura pamuchinjikwa.•
<< Waarheid te midde van teenstrydige oortuigings (Afrikaans)